Tsy inona sy tsy inoana izay hoe zava-bita… | NewsMada
Tsy inona sy tsy inoana izay hoe zava-bita…
Par Taratra sur 30/07/2018
Tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana, fandrobana tany etsy sy eroa… Tsy misy tsy mikaikaika ny amin’izany. Nefa tsy hita mazava izay tena vahaolana afitsoky ny fitondrana. Manginy fotsiny ny kolikoly avo lenta, ny fisian’ny tsimatimanota, ny kiantranoantrano, ny raharaham-pirenena ananan-kavana…
Amin’izany, mampitsamboaboatra sy itompoana teny fantatra ny hoe zava-bita. Misy amin’ireo efa nesorina amin’ny toerany aza, mbola manamarin-tena amin’ny hoe asa natao: tsy misy toa azy, hono, hatramin’izay. Inona no eo? Mahita sy miaina izay tsapany isan’andro vaky ny isam-batan’olona, ny isan-tokantrano, ny isam-paritra…
Misitraka inona amin’izao àry ny tsirairay sy ny rehetra? Na tena misy sy azo tsapain-tanana izay hoe fihatsaram-piainana, ohatra, na fandrosoana, na fanantenana ahay ny hoavy… Mety misy tokoa ny zava-bita na asa natao? Na tsy hitan’ny maro, na tsy ampy fampahafantarana, na endri-javatra ivelany ihany, na tsy maharesy lahatra…
Raha tsy izany, tena miasa mafy tokoa ny mpitondra, fa tsy ho an’ny vahoaka ifotony izay tamberin’andraikitra imasoany amin’izany. Iza àry no tena misitraka izay hoe asa vita? Izay no raharaha, na tsy mampifankahazo. Ny ao anaty fitondrana ihany no mandona tapany hahazoana erany amin’ny asa atao sy ny zava-bita?
Na ny olom-bitsy akaiky sy manodidina kely azy no mahazo tombony amin’izany, na ny mpiara-miombon’antoka anaovana tamberin’andraikitra, na ny vahiny hifampizarana kopaka isasahana na handoavana erany noho ny dona tapany… Nahoana? Be loatra ny ankifonofono amin’izao fitondrana izao, hany ka manjaka ny honohono.
Na izay atao sy lazain’ny mpitondra aza, tsy inona sy tsy inoana intsony. Manampy trotraka ny politika miantehitra amin’ny any ivelany. Tsy hita izay tena hoe avy amin’ny tena fa ny trosa manaboka sy ny fanampiana ikimpiana amin’ny tany sy ny harem-pirenena voaroba noho ny gaboraraka… Izany ve no hoe zava-bita?
Tsy mahagaga raha mikaikaika ny vahoaka, tsy mahita inona na izay inoana ahay amin’izany. Tsy misy fiovana tsinona ny fiainany.